Ithegi: amazon kindle | Martech Zone
Ithegi: amazon kindle
Ngaba ucinga ngokuThengisa ngeeNcwadi?
NgeCawa, uJuni 24, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Singabameli abaphambili bokuphindaphinda umxholo… ii-webinars zokubhloga iiposti, iiposti zebhlogi kumaphepha amhlophe, amaphepha amhlophe kwi-infographics, infographics kwintetho, imiboniso kwii-ebook… kokukhona unokwenza umxholo ukusebenzele, kokukhona ungcono utyalomali onokuthi wenze kulo kunye nomxholo osemgangathweni ongcono oza kuwupapasha. Ukufunda nge-E yayisisihloko sencoko kwinkqubo yethu kanomathotholo noJim Kukral kwaye ukuqhushumba kwayo kuye kwatyeshelwa ngabathengisi. Nangona singazi i
NgoLwesibini, nge-27 kaDisemba ngo-2011 Douglas Karr
Abantu base-G + (abangazukubhidaniswa noGoogle +) bayile le infographic kwezobuchwephesha kwezona zinto zihamba phambili kwi-intanethi ngo-2011. Olu luhlu luthe zinzi ngokuthenga ngeQela, itekhnoloji ethe yaqhuma ekuqaleni konyaka kwaye ngoku sele iluphawu lonke uluntu lukope kwaye lufakiwe kwisicwangciso sabo. Izicelo zeGeolocation, iitafile, imveliso esekwe kwilifu, ividiyo ekwi-Intanethi kwiShishini, kwi-Q & A ekwi-Intanethi (kubandakanya abathengi bethu eChaCha!), Crowdfunding, kunye neMobile
NgoLwesine, Novemba 15, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ayisiyiyo kwaphela into ebendiyicinga, kodwa ndiyamangaliswa yindlela ecothisa ngayo imali eyinikiweyo eyi- $ 1,000. Okwangoku sinebhlog eyi-1, iBhlog yeParadesi, othumele ungeniso lwabo ekunikezelweni! Ibhulogi iParadesi ibhale isithuba esinye esifanelekileyo esinokubanika i- $ 1,000! Iintsuku Ezilishumi Ekhohlo! Oko kuthetha ukuba xa ungenisa iposti yakho, utyhalele ukungangqinelani kwi-50%! Bhala iposti yomxhasi ngamnye